Pre-baiko HomePod voalohany handresy ny fifaninanana rehetra afa-tsy ny Amazon Echo | Avy amin'ny mac aho
Toy ny mahazatra ary rehefa misy ny fandefasana vaovao, ireo orinasam-pikarohana dia napetraka mba hanandrana manolotra tarehimarika amin'ny famandrihana na fivarotana voalohany. Miaraka amin'ny fanombohan'ny HomePod, ny orinasa NPD nanara-maso mba hahalalana hoe inona ny fahombiazana voalohany an'ny mpandahateny Apple vaovao.
Raha ny voalazan'ny NPD, ny fangatahana voalohany an'ny HomePod dia avo kokoa tamin'ny nanombohany ny fitaovana nifaninana rehetra, afa-tsy ny Amazon Echo, ilay mpandahateny mahay an'i Apple, fitaovana iray izay manana ny kinova fototra, ny Echo Dot, manana $ 50 miampy haba, raha ny HomePod dia tafakatra hatramin'ny $ 349 miampy hetra.
Ny orinasa NPD dia nanara-maso ny angona fivarotana HomePod, na dia toy ny mahazatra sy tsy misy fanamafisana ofisialy aza noho ny tsy fahampian'ny Apple, tsy afaka nanome isa momba ny varotra, saingy afaka nanatsoaka hevitra fa ny pre-order HomePod dia avo kokoa noho ny baiko teo aloha izay namboarin'ireo fitaovana hafa toa ny Sonos One na ny Google Home Max teo aloha.
Ny hany tokana dia hita ao amin'ny Amazon Echo Dot, fitaovana iray izay araka ny NPD niaritra fividianana an-tsokosoko nataon'ny mpampiasa maro, Fitaovana izay manana vidiny mora dia kely, 50 dolara, na dia indraindray aza dia hitantsika amin'ny latsaky ny 30 dolara ao amin'ny tranonkalan'ny Amazon ihany izany, fa ny tanjony dia tsy mitovy amin'izay omen'ny Apple HomePod antsika.
Ny mpihaino kendrena amin'ireo fitaovana roa ireo dia samy hafa tanteraka, ny HomePod no izy mifantoka amin'ireo tia mozika Na dia manolotra asa ho an'ny mpanampy manokana aza izy io, na dia tsy kalitao tsara indrindra aza izany, araka ny hitantsika taorian'ny fanamarihana nataon'i Luis mpiara-miasa aminay amin'ny Actualidad iPhone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny pre-order HomePod voalohany dia mihoatra ny fifaninanana rehetra afa-tsy ny Amazon Echo
Apple dia nanaparitaka tranga toy ny AirPods ho an'ny Apple Watch